About Us - Qunfeng tsaina fitaovana Co., Ltd.
Qunfeng tsaina fitaovana Co., Ltd. dia nampidirina tamin'ny 1995, ary nanao ny fikarohana, fampandrosoana, ORINASA MPANAMBOATRA, FANAPARIAHANA sy ny fanompoana ny fanorenana fitaovana milina toy ny andian-tsoratra azo tsapain-tànana fanaovana tsipika, AAC andian-tsoratra pamokarana sy ny fanorenana fitaovana fitsaboana fako. Maherin'ny 20 taona ny mitohy ezaka eo amin'ny fiezahana ho tonga lafatra eo amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana, ny orinasa manome maneran fanorenana orinasa amin'ny toerana fototra ho fanatsarana ny fototra mifaninana amin'ny alalan'ny tsara combing ny teoria hoe "manan-tsaina ny teknolojia" ny teoria ny "avo fahombiazany sy ny tontolo iainana namana ".
Ny Global Innovation System
isika maka foana tanàna hampiroborobo ny fampandrosoana amin'ny teknolojia manan-tsaina. Rehefa lehibe ny repsonsibility / ara-teknika ny R & D Jereo koa dia ahitana ny 100 matihanina amin'ny sehatra toy ny fahazarana fotsiny, hydraulic, sy ny fanorenana fitaovana elektronika. Efa nanangana andrim-panjakana roa fikarohana ary nanorina ny tsara indrindra stratejika fiaraha-miasa amin'ny oniversite malaza Shinoa sy ny fikarohana andrim-panjakana. Efa nandray anjara mavitrika amin'ny fandrafetana sy ny rectification mihoatra ny am-polony-pirenena sy ny fitsipika ho an'ny vokatra indostrialy. Efa nahazo mihoatra ny 200 Patents ho an'ny famoronana, jiro sy ny famolavolana ary koa ny zava-bita ara-teknika amin'ny faritany telo appraisals.
Ny fanatontoloana manfacturing System
Amin'ny fampiasam-bola tanteraka ny 45 tapitrisa RMB, Qunfeng hametraka 'Fujian Qunfeng milina Co., Ltd.' ary 'Qunfeng Industrial Park' ao amin'ny orinasa mpamokatra entana Nan'an Binjiang fitaovana fototra tamin'ny taona 2008, izay efa nanomboka ny vanim-potoana manan-tsaina vaovao. Ny valan-javaboary indostrialy mitana tanteraka ny 215.000 metatra toradroa amin'ny ankapobeny faritra gorodona vola ny 145.000 metatra toradroa. Mandray soa avy ny hery ara-bola matanjaka, Qunfeng dia nampiditra an-trano samy hafa sy ny fitaovana fikarakarana ampitan-dranomasina mandroso ao anatin'izany ny CNC fanodinana foibe, welding milina,-mandeha ho azy tanteraka hafanana fitaovana fitsaboana, tamin'ny laser fanapahana milina sy ny CNC ranon-dra lelafo-fanapahana milina. Miaraka foana ny zava-baovao, ny fiaraha-miasa amin'ny tampony iraisam-pirenena mpamatsy, ary ny fampidirana ao amin'ny Global avo-tsara loharanon-karena, Qunfeng efa lasa manan-tsaina, ara-teknolojia sy ny Eco-namana mpisava lalana eo amin'ny sehatry ny Shina fanorenana fitaovana milina saha sy ny mahafinaritra sady nandroso vokatra famolavolana, matanjaka sy mahery vaika kalitaon'ny vokatra ary koa ny fanoloran-tena sy tso-po ny fanompoana.
Global fanompoana rafitra
Amin'ny maha-modely orinasa ao Shina fanorenana fitaovana milina, Qunfeng manome upscale sy fitaovana faran'izay tsara amin'ny teknolojia ho an'ny manan-tsaina ny mpanjifa. Nandrakotra kontinanta enina tamin'ny 7 ivelany TOBIN-DASANTSY sy birao 24 ao an-toerana, dia nanompo 8000 Qunfeng mpanjifa avy amin'ny firenena 110 sy ny faritra amin'ny orinasa mpamokatra entana, marani-tsaina kokoa ny fitaovana mahomby. Qunfeng efa nahazo laza lehibe eto amin'izao tontolo izao sy ny vokatra ho naondrana tany avo lenta tsena maneran-tany, dia ahitana Azia, Eoropa, Amerika Atsimo, Oseania, Afrika sy Amerika Avaratra.
Manome voninahitra sy ny Awards
Nandritra ny 20 taona mahery ny fikarohana siantifika sy ny hanorina ho avy, Qunfeng mitana mafy foana fahatsapana andraikitra ara-tsosialy, ary efa nahazo avo fiderana sy fanohanana avy amin'ny fanjakana sy ny fiaraha-monina sy ny fanahin'ny "tsy fivadihana, Fanavaozana, fahombiazana sy ny Fiaraha-miasa". Qunfeng nanangana isan-karazany ao anatin'izany ny kalitao fitantanana certifications rafitra, rafitra fitantanana ny tontolo iainana, OHSMS, IPMS, ny fiarovana sy ny fitantanana penitra famokarana fitaovam-piadiana-pirenena sy ny fitaovana fitantanana kalitao. Qunfeng no nahazo maro mari-pankasitrahana, toy ny hoe "National Torch Program Key High-teknolojia Enterprise", "National Intellectual Property Pilot Unit", "Provincial rehareha sy mitondra zava-baovao Enterprise", "Engineering Teknolojia Research Center ny Provincial Concrete fitaovam-panorenana fiforonana Enterprises", "famantarana malaza Provincial", "Provincial Famous Brand Products", "Provincial malaza Enterprise", "Provincial International Famous Brand", "Provincial Product Mpanjifa-fahafaham-po" sy ny "indostria sy Informatization Integrated Enterprise Model".
Amin'ny voninahitra sy ny zavatra andrasana, Qunfeng dia mbola mikiry ny fototra tena ilaina ny famoronana hoavy Fitsikilovana sy ny zava-baovao, ary ny fanatanterahana ny asa fitoriana lehibe ny fananganana tanàna tamim-pahendrena ny tontolo iainana sy ny fanorenana fiaraha-monina ny tontolo iainana-namana teknolojia.